Andriamanitra miangatra ? | NewsMada
Miangatra Andriamanitra… Dibo-drano ny tany avaratra, avaratra andrefana ary eto afovoan-tany. Any amin’ny tapany atsimo kosa, maina ny tany, mihantona ny orana, tsy misy ny sakafo… mba toy ny ahoana aza ity Madagasikara ity raha jerena avy eny an-danitra? Sao milentika anaty rano ny tendrony avaratra ary miakatra manakaiky masoandro kosa ny tendrony atsimo? Ny iarahan’ny rehetra mahita aloha, mitongilana toy izay endriky ny firenena izay ny zava-misy.
Misy fiangarana e! Saingy “Andriamanitra tsy omen-tsiny, zanahary tsy omem-pondro, fa ny olombelona no be siasia”, hoy ny ohabolana izay. Na ny anaty ranobe na ny maintany, samy loza avokoa. Tsy maintsy iainan’ireo niangaran’ny vintana tsy afa-manoatra anefa. Mbola endrik’izay fiangarana izay, misy ireo mahay milalao ny zava-misy, ka mikatsaka ny tombony ho azy hatrany amin’ny fahavoazan’ny mpiray tanindrazana.
Niangaran’Andriamanitra… Matoa navahany amin’ny maro ka manam-pahefana, manambola ary be voninahitra ireo olom-bitsy ireo, misy antony angamba izany. Hafahafa fijery azy ireny ny ankamaroan’ny Malagasy, indrindra ireo misedra olana maro amin’izao fotoana izao. Tsy ny any anaty ranobe sy ny any amin’ny maintany sy kere ihany mantsy no sahirana izao, fa saika ahitana fimenomenomana avokoa ny lafivalo. Izay tsy mitaraina amin’ny afitsoky ny toetr’andro, mitaraina amin’ny tsy fandriampahalemana, lalan-dratsy, tsy fisian’ny asa, sns.
Fantatra, hono, fa misy esorina amin’ny toerany ato ho ato ny sasantsasany amin’ireo mpitondra manam-pahefana ireo. Efa niaraha-mahita ihany koa anefa ireo vao nofidina sy notendrena ho loholona teo, izay nanomboka nampahafantatra ny tenany tamin’ny alalan’ny fiadiana karama sy tombontsoa. Tsy manantena ireo “niangarana tsara vintana” intsony anefa ireo “niangarana ratsy vintana”. Fa mbola hankininy amin’ny ao ambony ny androny, fa ny hoavy efa tsy eritreretiny intsony…